Guudlaawe oo qaatay go'aan ka dhan ah Farmaajo iyo Fahad | KEYDMEDIA ENGLISH
Guudlaawe oo qaatay go’aan ka dhan ah Farmaajo iyo Fahad
Madaxweynaha Hirshabeelle, Cali Guudlaawe, ayaa sida la soo sheegayo u tafa-xeytay soo saaridda Aamino Maxamed, oo Fahad iyo Farmaajo isku dayayaan in ay ka hor istaagaan dib ugu laabashada Golaha Shacabka.
BALADWEYNE, Soomaaliya - Sida ay muujinayaan xogo loo qaateen ah, Madaxweynaha Maamulka Hirshabeelle, Cali Guudlaawe Xuseen, ayaa go'aan ku gaaray soo saaridda Xildhibaan Aamino Maxameed Cabdi oo ka mid ah shaqsiyaad kuraas Baarlamaan u doontay Baladweyne.
Xildhibaan Aamino oo Baarlamaankii 10-aad, ku fadhisay kursiga HOP#135, ayaa todobaadyadii la soo dhaafay la kulmeysay culeys kaga imaanayay dhanka Madaxtooyada Soomaaliya, maadaama Fahad Yassiin, uusan dooneyn in Aamino dib ugu soo laabato Golaha Shacabka.
Hayeeshee, baaqyo kala duwan oo ka yimid inta badan bulshada Soomaaliyeed ee siyaasadda u dhuun duleela, beesha leh kursiga iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta saameynta leh, oo ku wajahan in Guudlaawe, soo saaro Xildhibaan Aamino, ayaa sababtay in uu hoos u dhaco damicii Fahad Yaasiin.
Aamino, ayaa lagu xasuustaa, sidii geesinnimada lahayd oo ay u wajahday kiiska Ikraan Tahliil Faarax, oo ah gabar ka tirsaneyd NISA, oo tan iyo bartamihii sanadkii hore, ku maqan gacanta hoggaankii xilligaas ee hay'adda.
Dhawaan, Madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaawe ayaa xil ka qaadis ku sameeyay Guddoomiyihii Guddiga doorashada Hirshabelle, Axmed Xasan Diini, kadib markii uu isku dayay inuu gacan-bidixeeyo doorashada qaar ka mid ah kuraasta taalla Baladweyne oo uu ku jiro HOP#135.